Maka: uvavanyo lwewebhusayithi | Martech Zone
Maka: uvavanyo lwewebhusayithi
Ngelixa i-Intanethi iqhubeka nokuvela kwaye sele ikho kangangeshumi leminyaka, umhlaba uyayazi kakuhle indlela yokwenza amava omthengi amahle. Ukufana phakathi kwendlela obaphatha ngayo abathengi buqu kunye nendlela obaphatha ngayo kwi-Intanethi ziyafana xa uzama ukwenza elona thuba liphezulu lomthengi. I-infographic yi-Monetate: Abathengi balindele unxibelelwano olufanelekileyo kakhulu kwi-Intanethi kunye neempawu. Kumashishini amaninzi, ukukwazi ukuhambisa ifayile ye-
Le yingxoxo-mpikiswano eqhubeka ukuba nomsindo xa isiza kwi-Intanethi… kutheni kufanele ukuba ndihlawule isisombululo xa ndingasebenzisa esimahla? Sisebenzisa uninzi lwezicelo zasimahla- kodwa ngenxa yamava ethu kolu shishino, ndicinga ukuba singawuthandi umthetho. Njengearhente, sisebenzisa ngokupheleleyo itekhnoloji esiyifumana iluncedo kwaye siyibeka ekusebenzeni ukunceda abathengi bethu. Amaxesha amaninzi sibona
I-Monetate ikhuphe i-infographic enolwazi malunga nokuba ucinga ntoni kunye nendlela yokucacisa indleko yesixhobo sokuvavanya iwebhusayithi. Ukujonga ngokubanzi kwimiceli mngeni, iindleko, ifuthe, iindleko ngqo, iindleko ezingathanga ngqo kunye namathuba anokubonelelwa kuvavanyo lwewebhusayithi. Uqikelelo lwezezimali lwekhulu leminyaka elaziwa njengexabiso lilonke lobunini (TC) lunokunceda ukumisela iindleko ezichanekileyo nezingathanga ngqo zokuthenga. Yamkelwe nguGartner ukunceda ukulinganisa indleko eziyinyani ze
Sele sithumele iphepha lokufika kweyona mikhwa ilungileyo ye-infographic etsala umdla omkhulu. Le infographic evela kwi-Monetate, ukuVavanywa kweWebhusayithi: Hambisa ngaphaya kwePhepha lokuFika, kuyithatha ngenotshi… ukubonelela ngamagalelo kwamanye amaphepha ukuvavanya, izinto zokuvavanya, ukuvavanya abaphulaphuli, ukuvavanya izisombululo kunye nokuqwalaselwa xa kuthengwa isisombululo sovavanyo. Abathengisi abakhaliphileyo bayaliqonda ixabiso lovavanyo. Ngethuba elifutshane, ukuvavanywa kwewebhusayithi kuye kwavela ekutshintsheni
NgoLwesithathu, nge-4 kaJanuwari 2012 NgoLwesibini, Januwari 3, 2012 Douglas Karr
Ngaphandle kovavanyo lokukhangela, isantya kunye nentlalontle, kukho izinto ezibalulekileyo kwindawo yovavanyo ekufuneka inkampani yakho isebenza kuyo ukuhlalutya indlela eziguqulwa ngayo zibe ngabathengi. Izinto ezikumaphepha anje ngamaqhosha okubizela isenzo, ubeko, ukukhangela, ikopi, ukukhushulwa, ukunikezelwa, inkqubo yokuphuma, inkqubo yokukhetha imveliso kunye nokukhuseleka kufuneka kuvavanywe rhoqo ukufumana imiba kunye nokuphucula ukusebenza kwephepha lakho lokufika okanye iphepha le-ecommerce . Iinkampani ezonwabileyo